Iidattoos zejoka kunye nentsingiselo yazo | Ukuzoba
Iitattoos zeedragons, abangaphambi kobutyebi kunye nokuzala
UAntonio Fdez | | Iimpawu zeTattoos
Ezi zigongqongqo zeentsomi zasempuma bezikho ukususela kumaxesha amandulo kwiintsomi ezininzi kunye namabali asekhona namhlanje. Kwaye ukuba azikho mbalwa iimovie zaseHollywood eziye zaqikelelwa kwiscreen esikhulu nalapho ezi zilwanyana ziphaphayo zinokubonwa khona. Iidragons bezisoloko zizinto ezilayishwe ngesimboli esinzulu kunye nembalingakumbi eAsia.
Kungenxa yoko le nto Iitattoo zenamba Zibonisa konke oko kufuzisela nembali. Kuxhomekeke kumda weplanethi esikuyo, iisimboli ezimelwe zezi zirhubuluzi ziphaphayo ezinamazinyo amakhulu kwaye zinakho ukutshica umlilo ziyahluka kakhulu. Kwimeko yeedragons zasempuma, kwiintsomi ezahlukeneyo esinokuzifunda kwiincwadi zamandulo siyakubona oko Iidragons zii-harbingers zenzuzo kunye nokuzala.
Ke ngoko, Iitattoo zejoka zinokubonwa njengendlela yokubonisa kunye / okanye ukulindela isimangaliso esihle. Ngokuchasene neDragons eNtshona. Kwaye kweli cala leplanethi, amabali ahlala ethetha ngezidalwa zasendle, eziyingozi nezingalawulekiyo. Abonakalisi bobomi, iintsapho kunye namakhaya.
Malunga ne Uyilo lwe dragon tattoo, sinokuzifumana zimelwe ngeendlela ezininzi. Ngaphandle koku, zihlala zihlala zimelwe ngendlela efanayo apho zatsalwa yinkcubeko yaseTshayina neyaseJapan. Malunga ne indawo emzimbeni apho eyona tattoos yedragoni ilungileyo, kuba inyani kukuba ixhomekeke kuyilo ngokwalo. Nangona okuqhelekileyo kukuzifumana esifubeni okanye kwiingalo ezijikelezayo.
Singafumana kwakhona inyoka emise izizwengakumbi ukusukela xa ii-tattoos zesizwe zazithandwa kakhulu. Nangona namhlanje bambalwa kwaye bambalwa abantu abakhetha olu hlobo loyilo. Ngokwam bendiya kuyenza ngesitayile sokwenyani kwaye ndisebenzisa iigrays kunye neempawu ezimhlophe.
Imifanekiso yeDrako Tattoos
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iimpawu zeTattoos » Iitattoos zeedragons, abangaphambi kobutyebi kunye nokuzala
Iitatto ezinamagama amancinci
Igama leetato egxalabeni